Indlu yasekhaya Recipes Zifundo ze sibini Beshbarmak
Beshbarmak okanye i-bishbarmak, okanye ihlasele iBeshbarmak-isidlo saseCentral Asia. Ngolwimi lwesiKyrgyz, i-beshbarmak ibhengezwa, e-Bashkir naseTatar - i-bishbarmak, ngesiKazakh-besbarmak, ekuguquleleni ithetha "iminwe emihlanu," kuba beyidla ngezandla zabo ekuqaleni. Isilwanyana esibilisiwe sisetyenziswe kwisitya kunye neodle (kespe, owl) kunye no-anyanisi kunye ne-spice sauce kunye kunye negalelo kunye nomhluzi kunye nemifuno eluhlaza. Ngokwesi siseko, khetha inyama (ingulube, inyama yenkomo, imvana), iziqholo kunye nohlobo lweeodod ukuthanda kwakho. Yaye qiniseka ukuba uzame isidlo esinomsoco kunye nesisondlo.
Ingulube inyama kwithambo 1500 g
I-dill entsha entsha 1
I-Celery ingcambu 1 pc.
Ipilisi yepenki 1 g
I-Fennel yomiswe 1 tsp.
Amaqabunga ama-2 eB.
Iingqayi zengqolowa 500 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela i-beshbarmaka eyahlukileyo ufuna inyama kwithambo, i-noodle (ikhaya, iipesiti ezikhethekileyo okanye ezinye), i-anyanisi, iziqholo kunye nemifuno.
Inyathelo 2 Ukuba isiqwenga somzimba sikhulu, sinqumle / usiqhekeke kwiinqununu ukuya kubukhulu bepen. Beka iziqwenga zenyama kunye nethambo kwisikhwama samanzi abandayo, ngoko umhluzi uya kuba ugciniwe, ufike kwi-thumba uze ususe isikhephe.
Inyathelo lesi-3 Wongeza isetyu, iqabunga le-bay, isitshixo esomileyo okanye esitsha esitsha se-celery, i-pink peppercorn, i-fennel (okanye i-spice ye-spices oyithandayo) kwaye upheke inyama uze uphekwe ngaphezu kobushushu obuphakathi.
Isinyathelo 4 Susa isilwanyana esilungisiwe kumhluzi, uze unyuke umhluzi ukususa iziqholo (iqabunga lakwawo, iifoloyi zepilisi, njl njl.).
Inyathelo 5 Yinquma inyama ibe yizicucu.
Inyathelo 6 Pheka i-noodle (umhluzi) emhluzweni ukusuka ekuphekeni kwenyama.
Inyathelo lesi-7 Ukulungiselela i-sauce, gcoba u-anyanisi, ucheze kwi-oyile yemifino, ityuwa, uthele umhluzi (malunga ne-1 ukupheka) uze ufumane imizuzu eyi-10. Yongeza i-allspice yomhlaba okanye ezinye iipilisi ukuze zive.
Isinyathelo 8 Beka i-noodle kwisitya esicacileyo esicacileyo okanye isitya sokukhonza, kuyo iinqununu zenyama kunye phezulu kunye ne-onion sauce kunye ne-parsley ne-dill. UBeshbarmak ulungele, umkhonze umhluzi wenyama kwisitya.
Ubusika ngeenbanana kunye nemihla
Tournaers nge zucchini
Indlela yokukhetha amakhethini afanelekileyo kunye namakhethini
Imilenze emnandi yenkukhu
Ama-muffins ase-Apple kunye nama-hazelnuts ngaphandle kwamaqanda
Ukubalwa komjikelezo wesini kubafazi
Fettuccine kunye ne-asparagus, ii-peas ezihlaza kunye neha
U-Ekaterina Andreeva wenyuka edlala umdlalo "Nureyev" waza wathumela ividiyo ehlazo
Isibikezelo seenkwenkwezi ngeenkwenkwezi ze-2010
Ukukhetha indlu yangasese okanye i-bidet
Isaladi "Ithenda yenkukhu"
Ubisi lobisi kwi-multivark
Indlela yokugcina inzala yomntu wesondo
Kutheni ndilahlekelwa isisindo kungekho sizathu?
Iidraphi zokulungiselela izitya ezimnandi
Inhlanhla kunye nempumelelo ngonyaka we-Tiger
Abathathi-nxaxheba abaqaqambileyo be-Eurovision yabo yonke iminyaka